Ndị Motorola dị na Bullitt Group iji mepụta Smartphone | Gam akporosis
Motorola jikọtara ya na Bullitt Group iji mepụta amaala amaara ama
Mụrụmụrụ smartphones, na-akpọ «jupụtara na ntị igwe« ha malitere n’ahịa afọ ole na ole gara aga. Na ha bịara nọrọ n'ihi na taa nọgide na-enwe ngalaba nke ndị ọrụ na-achọ ụdị ọdụ a eguzogide. Ihe akaebe na ha nọgidere na-agbanwe na na ha nọgidere na-achọ bụ mkpakọrịta nke ndị isi egwuregwu abụọ dị na mpaghara ahụ dịka Motorola na Bullit Group. Ekele dịrị ndị otu a, n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ihu igwe ọhụrụ Motorola nke ekwentị "ala niile".
Na mkpokọta, ụwa nke ekwentị mkpanaaka na-agbanwe ma na-emepe emepe. Anyị na-ahụ otu ọhụụ kachasị elu nke ụlọ ọrụ ọ bụla si tinye atụmatụ ọhụrụ, ndị nrụpụta dị ike karị na igwefoto dị egwu. Ma ọ bụghị ndị ama ama niile na-achọ otu n’ime ekwentị kachasị. Mgbe ụfọdụ n'ihi ihe gbasara ego, kamakwa n'ọtụtụ oge maka ezigbo ihe ma ọ bụ mkpa ihe.
Motorola ga enwe "igwe igwe" nke ya
Ọ bụ eziokwu dị ịrịba ama na Motorola, otu n'ime ndị kacha ewu ewu ekwentị, ikpebi ike gị onwe gị akara nke jupụtara na mobiles. Ihe doro anya na-egosi na a ka nwere nnukwu mkpa maka ụdị ngwaọrụ a. Ikekwe were ya malite egbe maka ndị ọzọ amaara ama ka ha kpebie maka ịmepụta nke gị rugged ngwaọrụ nakwa. Ọ bụrụ na Motorola na-ada ka ihe anyị, ọ bụ n'ihi na ọ dịlarị na katalọgụ niile metụtara teknụzụ mkpanaka.
Na Motorola enyochaala onye òtù ọlụlụ dị ka Bullitt Group ọ bụghị ihe mberede. Emeputa onye ọsụ ụzọ na-eke ekwentị nke ekwentị na-arụ ọrụ dị arọ onye jisiri ike pụta ọtụtụ afọ, ọbụnadị inweta onyinye mba ụwa maka ihe okike ya. Ọ bụghị n'efu ị debanyere akwụkwọ ikike nke ngwaahịa ngwaahịa maka Caterpillar ma ọ bụ Land Rover, n'etiti ndị ọzọ. Ugbu a sonyere Motorola iji weta udiri ahihia ohuru ohuru nke ahụ ga-enye ọtụtụ ihe iji kwuo maka ya.
N'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịmata ọtụtụ ngwaọrụ amụrụ site na njikọ a na-atọ ụtọ n'etiti Motorola na Bullitt Group. Ndị hụrụ egwuregwu dị egwu agaghị ahapụ ihe ọ bụla dị ugbu a iji nweta ngwaọrụ na-eguzogide ọgwụ. Ná ngwụsị nke Machị anyị ga-enwe ike ịmata nkọwa niile gbasara ọdụ ọhụrụ ndị a, na dị ka mgbe niile, anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola jikọtara ya na Bullitt Group iji mepụta amaala amaara ama
Waze abanyelarị Audible ka inwee akwụkwọ ọdịyo na pọdkastị gị n'aka
Etu esi emekọrịta ọba akwụkwọ egwu YouTube na gam akporo Auto